Wasiir Maareeye: “Waxaan shahaadooyin guddoonsiinay dad aan u aragnay inay wax u qabteen bulshada” SAWIRRO – Radio Muqdisho
Wasiir Maareeye: “Waxaan shahaadooyin guddoonsiinay dad aan u aragnay inay wax u qabteen bulshada” SAWIRRO
Munaasabad lagu xusayay dib u howlgelinta Warbaahinta Qaranka, isla markana dib loogu furayay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa lagu qabtay xarunta Wasaaradda Warfaafinta, iyadoo shahaadooyin lagu abaalmariyay dad ay madaxda Wasaaraddu u arkeen inay howlkarnimo muujiyeen, isla markaana bulshadooda wax u qabtay.
Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dadka shahaado sharafta la guddoonsiiyay ay yihiin dad ay Wasaaraddu u garatay inay howlo u qabteen bulshada, isagoo xusay in qofkasta ay shahaadadiisa ku qorantahay waxa uu ku muteystay in shahaadada la guddoonsiiyo.
“20 iyo dhowr sano ayaan ku soo jirnay dhibaatooyin badan, dad badan ayaa dadaalay, marka waxaan caawa halkaan shahaado sharaf guddoonsiineynaa sideed halgamayaal aan u aragnay inay wax wanaagsan sameeyeen, waxaan kaloo u aragnay in tani ay tahay bilow fiican, qofkasta waxaan u sameynay shahaado calanka Soomaaliya ku wareegsanyahay, waxaana ku qornay magacyadooda iyo waxa ay qabteen” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Agaasimaha Warbaahinta Qaranka Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-cadaalla oo ka hadlay munaasabadda lagu xusayay dib u howlgelinta Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in dadka shahaadada sharafta lagu abaalmariyay ay yihiin dad u adeegay bulshadooda, oo u qabtay wax wanaagsan.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo shahaadada lagu abaalmariyay ku muteysan dadaalkiisa ku aadan ka digista qatarta xagjirnimada diimeed.
Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale (Xabeeb) oo ku muteystay wax u qabashada dadka dhimirka la’ oo ay ku jiraan dad badan oo ku dayacnaa waddooyinka Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka.
Marwo Canab Xasan Cilmi guddoomiye ku-xigeenka Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed oo iyana ku muteysatay dadaalka ku wajahnaa u soo taagnaanshiyaha ku wargelinta shacabka horumarka dalka.
Mudane Maxamuud Xareed Dhageey oo isna ku muteystay dib u soo nooleynta ganacsiga dalka iyo soo jiidashada dadka dalxiisayaasha ah,
Waxaa kaloo jirta afar qof oo goobta ka maqneyd kuwaasi oo lagu abaalmariyay shahaado sharaf waxayna kala yihiin
Axmed Jaamac Maxamed (Axmed Village) oo shahaado sharafta ku muteystay dib u soo nooleynta horumarinta ganacsiga dalka oo xanuun darteed xafladda uga maqnaa.
Farxiyo Maxamuud Mire oo ku muteysatay u gar gaaridda dadka dhiban ee aan dalka wax looga qaban Karin, waxaana ka mid ahaa dadkii ay wax u qabatay Axmedeey Cabdi Gaashaan oo ku dhaawacmay xuska 4-ta April ee dib u howlgelinta Telefishinka oo ku sugan dalka dibadiisa, waxaana shahaada sharafta u guddoontay Wariye Muno Cumar Xasan oo ka tirsan Warbaahinta Qaranka.
Abuukar Jaamac Cawaale (Qaad-diid) oo ku muteystay sida uu ugu halgamayo la dagaallanka qaadka, waxaana uu sabab u ahaa in qaadka laga joojiyo dalka Ingiriiska, isagoo ololaha ka dhanka ah Qaadka hadda ka wada qaar ka mid ah gobollada dalka.
Mudane Cabdi Muuse Maaxaay ayaa uu dambeeyay dadkii loo gartay in shahaado sharaf la guddoonsiiyo, kaasi oo uu ku muteystay wax u qabashada dhibanayaasha gudaha dalka wax looga qaban waayay oo uu adeegyo caafimaad oo dibadda ah u fidiyay oo ay ku jiraan carruur isku dhagan, isagoo ku nool dalka Mareykanka.
Ugu dambeyntii Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay in sideeda qof ee shahaadooyinka lagu abaalmariyay ay tahay mid bilow ah, isla markaana Madaxda Qaranka looga fadhiyo in dadka sidan oo kale bulshada wax u qabta ay bilad geesi siiyaan, taasi oo tusaale fiican u noqoneyso dad sida mutu-dawacnimada ah ugu adeegaya bulshada.
Sawir Qaade:- Qadar, Sakariye iyo Maxamed Cabdiweli
Wasiirka Gaashaandhigga “Odayaasha Caabudwaaq waa inay hormuud u noqdaan dib-u-heshiisiinta iyo horumarinta”